"Shan Kubaddood Oo Aan Saddexley Ku Dhaliyay Ayaan Sariirtayda Ku Haystaa, Iyagu Waa Gabdhaha Saaxiibka ila Ah" - Gool24.Net
Da’yarka kooxda Red Bull Salzburg ee Erling Haaland ayaa shaaca ka qaadah hadal cajiib ah kahor kulamada isreeb-reebka Euro 2020 ee uu xulkiisa Norway la yeelan doono Faroe Islands iyo Malta.
Haddii uu xilli ciyaareedkani mucjisooyin leeyahay waxa mucjisadiisa ugu weyni ay tahay Haaland kaas oo qaab ciyaareedkiisu uu aad uga weyn yahay da’diisa 19-ka sano ah isla markaana muujinaya bandhigyo mustaqbal weyn balan-qaadaya.
Haaland ayaa durtaba xiiso ka helaya kooxaha ugu waaweyn qaarada Yurub iyadoo dhawaan ay kooxdiisu dul dhigtay lacag 86 Milyan ah haddiiba ay ka fursan weydo inay mustaqbalka dhaw iibiso.
Waxyaabaha mucjisada ah ee uu soo sameeyay Haaland ayay kamid tahay inuu sagaal gool kasoo dhaliyay hal kulan mar uu u ciyaarayay xulka da’yarta ee Norway.
Waxa intaas u dheer inuu haatan yahay hoggaamiyaha gool dhalinta Champions League oo uu toddoba gool hoggaanka ugu hayo isaga oo laba gool ka sarreeya Robert Lewandowski oo ah midka ugu soo dhaw.
Ma sahlana in da’da 19 sano jirka lagu dhaliyo shan saddexley balse Haaland ayaa sidaas soo sameeyay isaga oo haatan ka sheekeeyay inuu dhammaan kubaddahaas sariirta u qaato wakhtiga hurdada una yihiin sida gabdho uu saaxiib la yahay.
Erling oo arrimahaas ka warramaya ayaa yidhi “Waxaan sariirtayda ku haystaa shan kubaddood saddexley si wanaagsan ayaanan ula seexdaa iyaga, Iyagu waa gabdho aanu saaxiib nahay, Dhammaantood waan jecelahay”.
Haaland ayaa shantaas saddexleyd mid kamida horyaalka Austria kasoo dhaliyay toddobaadkan halka ay sidoo kale qayb ka tahay mid Champions League ah oo uu Genk shabaqeeda la gaadhay.